दिनहुँ पटक पटक यौन सम्बन्ध राखे महिलाहरु यसरी छुट्टीन्छन्, देखिन्छन् यस्ता संकेत – Etajakhabar
एजेन्सी । एउटा नयाँ जिन्दगी सुरु हुन्छ । विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँछ । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन आउँछ । पुरै जिन्दगी बदलिन्छ र यो समायोजन गर्न अलि समय पनि लाग्छ । साथै उनीहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ । आखिर बिहेपछी किन यस्तो हुन्छ त ? उनीहरुको नितम्ब किन फुल्छ ?
केटाहरुलाइ जान्ने जिज्ञासा नै यहि हो, हेर्नुस यस्तो छ कारण
धेरै केटाहरूलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ र जान्ने इच्छा हुन्छ । के कुराले गर्दा महिलाको शारीरिक स्वरूप मा परिवर्तन आउँछ त ? यो कुरा यहाँ भनिनेछ । एक सर्वेले यसको बारेमा पत्ता लगाएको छ ।
एक अध्यनका अनुसार महिलाहरूमा आउने परिवर्तनको कारण खुल्न आएको छ र यो सुनेर तपाइँको होश उड्छ । यो सर्वे युनिभर्सिटी अफ लिड्स का सोधकर्ताले गरेका थिए । यो सर्वेका लागि महिलाहरुको हिपको सबै भन्दा ठुलो भाग र कमरको सबै भन्दा पातलो भागको नाप लिइयो ।
यसबाट के पत्ता लाग्यो भने जुन केटिहरुले एक दिनमै पटक पटक यौन सम्बन्ध राखे उनीहरुको हिपको आकार अरु महिलाको भन्दा बढी थियो । यो पनि थाहा भयो कि जुन महिलाको कम्मर पातलो हुन्छ उनिहरु बच्चालाई सजिलै जन्म दिन सक्छन् । जसको हिप ठुलो छ उनिहरुलाइ गर्भवती हुदा खासै समस्या नहुने बताइएको थियो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ०५, २०७५ समय: २०:४०:५७
काठमाण्डौमा प्रहरीले समेत समात्न नसकेको राँगो जसलाई समात्न नसकेपछि गोलि हानेर मार्नु पर्यो !
सुनसान ठाउँमा यो रोकिएको कारमा यी ब्याक्तिले कुकुरसँग यस्तो हर्कत गरे की जुन दृश्य देखेर सबैका आखाबाट आशु झरे !